Dooniin boba'aa Iiraan osoo Jibiraaltar qaxxamuruuf jettuu qabamte gadhiifamte - BBC News Afaan Oromoo
Doonittiin amma maqaa haaraa baafatetti-Adiriyaan Daariyaa-1
Dooniin Iiraan erga ji'a Waxabajjii boba'aa gara Sooriyaatti geessaa jirti jedhamuun shakkamtee qabamuun Jibilaartaritti qabamtee turte gadhiifamte.
Sakata'insi galaanarraa gaggeeffame akka agarsiisutti dooniin taankerii boba'aa feeteettu kun gara bahaa galaana medetiraniyaanitti imalaa kan turte yoo tahu bakka gahumsa ishee immoo Kalamaataa Giriik jechuun galmeeffatteetti.
Jibilaartaar gaaffii Ameerikaan doonii maqaa ishee Girees 1 irraa gara Adiriyaan Daariyaa jedhamutti jijjiiratte kana irra deebiin ugguruuf dhiyeessite hin fudhanne.
Ameerikaan gaafficha daqiiqaa xumuraa irratti gaafa Jimaataa darbe kan dhiyeessite yoo tahu guyyaa tokko booda Jibilaartaar ajaja doonicha hidhuuf dabarsitee turte deebistee dhiiste.
Jibilaartaar gaaffii Waashingitan doonittii hidhuuf dhiyeessite irratti walii hin galu jette. Sababni isaa immoo qoqqobbii Ameerikaan Iraan irra keesse biyyota Gamtaa Awurooppaa keessatti fudhatama hin qabu jette.
Qoqqobbicha biyyotni Gamtaa Awurooppaa hin deeggarre ture.
Teeraan akka jettetti dooniiwwan humnoota galaana irraa donittii dabaalan nan erga jetteetti.
Dooniin ugguramtee turte kun namoota doonittii irra turan 29 waliin gaafa Waxabajji 4 bara 2019 yoo tahu gargaarsa mootummaa Ingiliziin ture.
Namootni doonii sana irra turan lammiilee Hindii, Raashiyaa, Laativiyaa, fi Filiippiinsi yoo tahan boba'aa gara Sooriyaa kan qoqobbii Gamtaa Awurooppaa jala jirtuutti geessaa jirti jedhamuunidha.
Tiraamp: 'Wal waraansa eegallaan Iraan lafarraa baddii'
UKn Iraan akka deeggartu ibsite
Tarkaanfichi UK fi Iraan gidduutti wal dhabdee kan uume yoo tahu Iraan doonii alaabaan UK irra jiru tokko naannoo biyyoota Galfi Isteno Impero jedhmutti uggurtee ture. Haa tahu malee abbaan qabeenyummaa doonittii mootummaa Iswiidinidha.
Doonittiin harka Iraan kan jirtu yoo tahu yoo hin gadhiiftu yoo tahe Ameerikaa waliin tahuun imala hulaa Haarmuuz irraan dooniin daldaltootaa Iraan taasisan nan dhorka jette.
Wal dhabdeen biyyoota Lixaa fi Iraan gara gabbisa niwukileeraa kanaan dura waliigalanii ture cabsuutti geesseera.
Iraan waliigalteewwan Ameerikaa waliin taasifte turte cabsaa jirti jedhamuun irra deddebiin komatamaa turte. Ameerikaan qoqqobbii dabalataa irra keessus biyyotni amtaa Awurooppaa kaan garuu waliigaltee duraan mallatteessine kabajna jechuun Ameerikaa fallessaniiru.
1 Caamsaa 2018
Waliigaltee niwukileeraa Iraan: Tiraamp deeggarsa dhaabuuf qophiirra jiru
Baqattoota Ertiraa Itoophiyaatti baqatanii 'dahoo dhaban'